Htc Sync သည် Outlook နှင့် Android terminal တို့ကိုထပ်တူပြုရန်ခွင့်ပြုပြီးယခုတွင်ပိုမို terminals များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Htc သည်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ပီစီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်၎င်း၏ application အတွက် update ကိုမည်သို့စတင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည် HTC Sync 3.0, ထို့နောက်ကတည်းကခွင့်ပြုခဲ့ရာ Outlook နဲ့ Android terminal အကြားအပြည့်အဝထပ်တူပြုခြင်း ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ပေါ်တွင် application များထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းအပြင် terminal နှင့်ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းအပြင်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်ပါ ၀ င်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့သည်လည်းအသစ်သော update ကိုတစ် ဦး နှင့်သာသဟဇာတခဲ့ကြောင်းမြင်တော်မူ၏ Android model Htc တောမီးထို့အပြင်စာဖတ်သူအချို့က၎င်းသည်အခြား terminal တစ်ခုနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်မှာမှန်ပါသည်။
ဒီနေ့မှာ Htc ကဒီ tool ကိုအသစ်ထပ်မံတပ်ဆင်လိုက်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဆိပ်ကမ်းအသစ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်စေတယ် အန်းဒရွိုက် ကဲ့သို့သော HTC Legend, HTC Desire၊ HTC သူရဲကောင်း(Android 2.1 ဖြင့်) သို့မဟုတ် Htc aria.
၎င်းကိုကူးယူရန်သင်ကူးယူရမည် ဒီမှာ ထိုသို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ၎င်းကို Windows ကွန်ပျူတာများတွင် Xp, Vista (သို့)7ဖြစ်သည့်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Htc Sync သည် Outlook နှင့် Android terminal တို့ကိုထပ်တူပြုရန်ခွင့်ပြုထားပြီးယခုတွင်သည်အခြား terminal များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ဤအပလီကေးရှင်းသည် Nexus တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်မလားသိလား။ nexus တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်သောအလားတူပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုသင်သိလား။
မင်္ဂလာပါ ... ငါတို့ချစ်သော MAGIC အတွက်အိပ်မက်တောင်မက်နေလား?
ဘယ်လိုထင်သလဲဆိုရင်အဆက်အသွယ်တွေကို outlook ကနေတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပုံရပေမယ့်သူကမှော်၊ သူရဲကောင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အကြားဆက်နွှယ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
https://www.androidsis.com/android-sync-sincroniza-microsoft-outlook-con-android/ ဒီမှာသင် have ရှိသည်
ကို Nexus ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်တွင်မကြာသေးမီက Nexus တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် android-sync ကို install လုပ်သည်။
ဒါဟာရှက်စရာကောင်းပေမဲ့ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး နိယာမအားဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့သော် Outlook ၏ရံဖန်ရံခါလုပ်ဆောင်မှုများသည် terminal ကိုမဖြစ်ပေါ်ပါ။ ထပ်တူပြုသည့်အခါလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်ကို“ ပျောက်ကွယ်သွားသည်”! မမေ့နိုင်သော !!!
Nexus ကအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Outolook နဲ့ syncing လုပ်တာကကြီးမားတဲ့ shit ပါ။ terminal ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းမယ် ။ ။ ။ HTC Sync သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်လျှင်။
Andres Palomino ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများ၊ သူငယ်ချင်းများ ... Android (Google) သည် Windows Phone7(Microsoft) ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ကိုသတိရပါ။ အကယ်စင်စစ်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြုံတွေ့ရပြီး Microsoft Outlook ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး Android နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ပါ။ Google က Outlook ထက်ဆင်တူပေမယ့်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Andres Palomino အားပြန်ကြားပါ
သငျသညျ activation ကုဒ်ရပါလိမ့်မယ်
အမြဲတမ်းလိုပဲ terminal တွေများများလာပေမယ့် Mac OS ကိုတောင်စဉ်းစားမနေတော့ပါဘူး။
ငါ HTC Desire ရတယ်။ ငါက Windows Mobile 6.1 ပါတဲ့ Samsung Omnia ရှိတယ်။ Omnia ကို Outlook နှင့်ထပ်တူလုပ်ပြီးသောအခါအဆက်အသွယ်အားလုံးကို HTC Desire 3.0 နှင့် Desire သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလုံးပြproblemနာမရှိဘဲအကွာအဝေးရှိမှတ်စုများနှင့်အချို့သောအဆက်အသွယ်များ၌မှတ်စုများပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် Android 2.2 ပါသည့် HTC Desire ရှိပြီး Outlook နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကမကောင်းပါ။ မင်းကိုပြောပြပါရစေ။
- ပြီးခဲ့သည့်လမှရက်ချိန်းများကိုသာသင်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ Desire ကိုအလုပ်အတွက်အသုံးပြုပါကသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်တွင်ပါ ၀ င်မှုများစွာရှိပါကဤမူကွဲအကြောင်းကိုသင်မေ့သွားနိုင်သည်။
- ရက် ၀ န်ချိန်းဆိုမှုအားလုံးနီးပါး (0: 00-0: 00) ကို 01:00 သို့မဟုတ် 23:00 တွင်ပြောင်းပြီးဒါကြောင့်သူတို့ကပြက္ခဒိန်တွင်နှစ်ရက်ကြာသည်။
အကျိုးဆက် - ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးမှုကိုလက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အချိန်များစွာဖြုန်းတီးခြင်းသည်အတော်လေးကြီးမားသည်။
ငါဟာနောက်ထပ်အရှုပ်အထွေးဖြစ်သည့်ဗားရှင်း 2.0.28 သို့ပြန်ပြောင်းသွားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် "အတန်ငယ်" ပိုကောင်းသည်ဟုထင်ရသည်။
Nieves နဲ့လည်းအတူတူပဲ။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသောပြproblemနာရှိသည့်ကွန်ယက်တွင်မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ပါ။ ငါဖြည့်စွက်မူကွဲသည်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများအားသင့်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်း၏ပြက္ခဒိန်တွင် Outlook 2007 ၏ပြက္ခဒိန်နှင့်ကျွန်ုပ် ၀ င်ခဲ့သည့်အရာများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
Nieves နဲ့ Pepe တို့လည်းငါနဲ့အတူတူပဲ။
၎င်းသည်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၎င်းကိုအလုပ်အတွက်အသုံးပြုသည်၊ HTC Desire တွင်ကျွန်ုပ်ချိန်းချက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းမထားပါ။
ငါသည်လည်း Outlook 2007 ရှိသည်။
ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် Outlook ဗားရှင်းပြproblemနာရှိမရှိကိုမည်သူသိသနည်း။
Paco၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် HTC ၏နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကညွတ်ကြော်စားရန်သူတို့ပို့လိုက်သည်ထက်နည်းနည်းလေးမှကြိုးစားခဲ့သည် - "ဖုန်းကပြaနာမဟုတ်၊ လည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) application" ထိုအရပ်မှသင်သည်ထိုသူတို့မရ။
ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များသည်မိတ္တူပွားထားပါသည်။ ၎င်းသည်လက်ကိုင်ဖုန်းမှကွန်ပျူတာသို့ထပ်တူမကျပါ၊ PC မှမိုဘိုင်းနှင့်ထပ်တူပြုသည့်အဆက်အသွယ်များကိုတစ်နေ့တည်းတွင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောနေ့များတွင်ပုံတူပွားထားသည်။
တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းမှုများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ clintes (ကုမ္ပဏီများ၏အမည်) မှအဆက်အသွယ်များကိုမမြင်နိုင်ခြင်းသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ Manolo၊ မင်းဖုန်းပြက္ခဒိန်ကအချက်အလက်တွေကို pc နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကမင်းရဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ OS သည် V. 2.2 ဖြစ်ပြီး htcsync 2.0.40 ဖြစ်သည်။
Manolo အတွက်။ Gadgets ထဲမှာ google search လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုရှိတယ်။ သင် install လုပ်တဲ့အချိန်မှာသင်က network ကိုရှာချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ရွေးစရာရှိတယ်။ ဖုန်းထဲ၌သင်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ အပလီကေးရှင်းစသည်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်သာအဆက်အသွယ်များကိုထည့်ပြီး၎င်းသည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ မင်းအတွက်ပြyouနာကိုငါဖြေရှင်းပြီလို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
Windows XP ကိုပါမောက္ခ SP3 ။ HTC Sync နောက်ဆုံးဗားရှင်း 3.0.5511 ဖြင့်ပြက္ခဒိန်မဟုတ်၊ အဆက်အသွယ်များလည်းထပ်တူပြုခြင်းမရှိ။ "PIM အဆက်အသွယ်များကိုကူးယူ။ မရပါ" သတင်းစကားပေါ်လာမည် ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်အတူပြproblemနာအတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် HTC ပညာရှင်များနှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်စကားပြောဆိုနေသော်လည်းထိုအရာသည်၎င်းတို့ထက်ကျော်လွန်နေဟန်ရှိသည်။ ငါ၏အအလုပ်အကိုင်အဘို့အလေးနက်ပြproblemနာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် HTC Desire ရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်မေ့ခဲ့သည်
Nieves မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း 2.0.28 ကို install လုပ်ပြီးပါကသင်သဘောတူသည်မှာ - "ဒီဟာကမကောင်းသတင်းဆိုးတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့်" တစ်ခုခု "ဟာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပုံရတယ်" အနည်းဆုံးတော့ပြက္ခဒိန်ကိုထပ်တူပြုသည် (များစွာသောကိစ္စများတွင်ချိန်းဆိုမှုများထပ်တူပြုခြင်း) ။
HTC သည် "တိုးတက်လာသည်" ဟုယူဆရသောနောက်ထပ်ဗားရှင်းများအတွက်မှတ်စုယူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဘယ်ထည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာ HTC Sync ပရိုဂရမ်သည်ပြက္ခဒိန်၏ညှိနှိုင်းမှုသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များအားသက်ဝင်စေမည့်ရွေးစရာကိုမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ... သူတို့ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်သက်ဝင်။ မရပါ။ အခြားအရာအားလုံးperfectlyုံအလုပ်လုပ်သည်။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ကျွန်ုပ်တွင် HTC Desire ရှိသည်၊ အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပျော်ရွှင်မိသည်၊ ယခုကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။ ငါအလားအလာနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး, ငါ့အလုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စမှာတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ iPhone ဟာပိုကောင်းလာမယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တွေမှန်လာလိမ့်မယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်မကျခင်အဖြေတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။
Syncronization ပြPROနာရှိခဲ့သူအားလုံးကိုသင် Outletbook နှင့်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ရောက်လာပြီးအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့နဲ့ထိရောက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ ၎င်းတွင် Google Calendar သို့သွားခြင်းပါဝင်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်၏အစီအစဉ်ကို Outlook မှ Google Calendar သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်
သင်၏ HTC Desire ၏အစီအစဉ်မှအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ
သင်၏ HTC အစီအစဉ်ကို Google ပြက္ခဒိန်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
(PS: စည်းညှိခြင်းမပြုမီ HTC အစီအစဉ်ကိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာမှာ Outlook မှလာသည့်ချိန်းဆိုမှုများနှင့်ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်မှလာသူများနှင့်အတူရောနှောသောအခါ၎င်းတို့သည်ပုံတူပွားခြင်းနှင့်အချို့သည်အမှားများဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံမှပြောကြားသည်)
(HTD ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကူးယူထားသော) executable ဖိုင်သည်အောက်ပါအမှားကိုဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ htc တက်တူးမှအဆက်အသွယ်များကိုကျွန်ုပ်၏ htc သစ်တောသစ်သို့ပြောင်းချင်သည်။ ငါကြိုးစားသောအခါငါရ: PIM အဆက်အသွယ်ကူးယူနိုင်ခြင်း။
hello felz dia၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်တူထပ်တူဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ HTC Magic ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ "အဆက်အသွယ်များကို PIM မှကူးယူ။ မရနိုင်သော" ပေါ်လာခြင်း၊ ထပ်တူပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
ဒီ PIM ဘာကိုဆိုလိုတာလဲမင်းတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်သိလား၊ ဘာလို့အဲဒါတွေကိုကော်ပီကူးလို့မရဘူးလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ငါမှာလည်းအလားတူပြproblemနာရှိခဲ့တယ်။ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုက Outlook အကောင့်တစ်ခုလုပ်ဖို့ပါ။ ဒီမှာ link တစ်ခုကိုထားခဲ့ပြီးတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။ http://www.youtube.com/watch?v=Mtr9zN3tROY တစ်ချိန်ကပြုသောအမှုအရာအားလုံးစုံလင်သည်
ဝမ်းနည်းပါတယ်ငါ link ကိုနေရာချရန်ပျက်ကွက်
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားစာဖတ်ပြသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်း၎င်းပရိုဂရမ်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဖွင့်ပါရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။
alan mayorca ဟုသူကပြောသည်
ငါမိုဘိုင်းကို pc သို့ချိတ်ဆက်သောအခါသူကထပ်တူပြုပြီးဆော့ဖ်ဝဲက၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လက်ကိုင်ဖုန်းမှအချက်အလက်များကို pc သို့ကူးပြောင်းလိုက်ပြီလားဆိုတာကိုကြည့်သောအခါအောက်ပါအမှားပေါ်လာသည်။ အဆက်အသွယ်များကို PIM မှကူးယူ။ မရပါ။ (၁၀၀၃)
alan mayorca အားပြန်ကြားပါ
အခြားအော်ပရေတာတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ Samsung Galaxy S ကိုအလွယ်တကူသော့ဖွင့်ပါ